မြန်မာပြည်တွင် စျေးအသက်သာဆုံးနှင့် အေ&#4 - MYSTERY ZILLION
မြန်မာပြည်တွင် စျေးအသက်သာဆုံးနှင့် အေ&#4
မြန်မာပြည်တွင် စျေးအသက်သာဆုံး ဒိုမိန်းနှင့် ဟို့စတင်များ
Free 1Gb (Mb မဟုတ် ***) ဟို့စတင် အပါ၀င် Domain များကို တနှစ်စာ မြန်မာငွေကျပ် ၁သောင်း ၁ထောင်နှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်..
GOLDEN PLAN *** ဒိုမိန်းအပါ၀င် Unlimited ဟို့စတင်တခုကို တနှစ်စာ ၅သောင်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
***** စျေး အသက်သာဆုံးဖြစ်ရမည်။ MB ဖြင့် ဘယ်တော့မှ မပေးပါ။ free hosting ကိုပင် 1GB ပေးထားပါသည်။
***** ၀ယ်ယူသူတိုင်း စိတ်တိုင်းကျစေရန် တာ၀န်ယူသည်။
***** ပါ၀င်သော Feature များ တခြားဆိုဒ်များထက် လုံး၀ သာလွန်ရမည်။
***** ပြောထားသည့်အတိုင်း မပါ၀င်ပါက ငွေပြန်အမ်းမည်။
ဘာလို့ Pusker မှာ ရွေး၀ယ်မလဲ ...
Admin *** [email protected] 0064 211831382
တေဇာတေ [email protected]
ကိုဖြိုး [email protected]
ကိုထိုက်မင်း [email protected]
မပင့်ဂိုး [email protected]
အမှတ်၂၁၊ နှင်းဆီလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းရှေ့၊ အလုံမြို့နယ်ခန်းမ အနီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း 228409(မနက်ပိုင်း), hp 09 680 6008(နေ့ခင်းပိုင်း)
1GB ဆိုတာကတော့ စိတ်၀င်စားတယ်.. ဒါပေမယ့် User တွေကို CPanel ကိုင်ခွင့်ပေးလား?
နောက်ပြီး Simple Scripts တွေကောဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ပါသလဲ? WP? Joomla? Durpal? နောက်ပြီး Free ကော Order မှာလို့ရလား?
Freehostingcloud.com မှာဆိုရင် Transfer Rate ကော Space ကိုရော Free မှာ Unlimited ရတယ်.. အရင်တုန်းကတော့ MM IP နဲ့၀င်လို့ရတယ်.. ခုတော့ MM IP ကို Bann ထားတယ်.. အဲ့ဒီ IP နဲ့ Free Order မှာလို့မရတော့ဘူးကော? Freehostingcloud.com မှာက Wordpress, Durpal, Joomla တွေက Installation လည်းလွယ်တယ်.. နောက်ပြီး User Activation ကလည်း မြန်တယ်... Order လုပ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်း ကိုယ့်ဆီ Mail ပြန်ပို့တယ်ကော? အရမ်းမိုက်တယ်..
တူညားကြော်ငြာတာကို ၀င်ဖြတ်တာဟုတ်၀ူးနော်.. . ခွိခွိ ... ဂလိုပဲ အီကျင့်ပါနေလို့ .. အဟတ်
ဟုတ်ကဲ့ .. အဲဒီမှာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ရင် အဲဒီမှာသုံးပါ။ ဒီမှာ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ သုံးပါ။
စိတ်မရှိပါနဲ့ ... ကျနော် ရေးဖို့ အချိန်နဲနဲနောက်ကျနေလို့ တခြားဆိုဒ်မှာရေးထားတာကိုပဲ ကူးပြီး တင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ .
တခြားအဆင်မပြေတာရှိရင် [email protected] ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
Enom လို Reseller တွေ အများကြီးရှိပါတယ်. Enom လဲ သုံးဖူးပါတယ်။ Enom က ၀ယ်ရင် ဒီစျေးမရဘူးဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ Enom က ကြာပါပြီ ... Enom ထက်ကောင်းတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်...
သတိထားကြည့်ရင် Godaddy လို ဆိုဒ်ကြီးမျိုးတွေကလဲ Reseller တွေပဲဆိုတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ် ...
Reseller ချင်းအတူတူ တဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့ Reseller ဆီက သွားထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ... Source ကို သွားယူပါတယ် ... အဲဒါကြောင့် တခြားရောင်းတဲ့သူတွေထက် ပိုသက်သာပါတယ် ... အဲဒါကြောင့် ပိုလျှော့ရောင်းပေမယ့် ကျနော်တို့မှာ အရှုံးမရှိပါဘူး...
အဲဒါကို ဒိုမိန်း၀ယ်ပြီးတဲ့လင့်မှာ Regrastrer အနေနဲ့ Pusker နဲ့ ပြတာကို တွေ့၇ပါလိမ့်မယ်။
မှန်ပါတယ် Secure paynet နဲ့ ပြပါလိမ့်မယ် .. အဲဒါကို လက်ရှိသုံးနေပါတယ် .. အဲဒါ Reseller အကောင့်ပါ... Pusker မှာ ကိုယ်ပိုင်အကောင့် ၃ခု ရှိပါတယ် .. Unlimited ဟို့စတင်ရှိပါတယ် ... reseller ရှိပါတယ် ... Vpn ရှိပါတယ် ...
အဲဒီ ၃ခုပေါင်းပြီး စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် ... အဲဒါကြောင့်မို့ Reseller တခုတည်း သီးသန့်လုပ်နေတဲ့ သူတွေထက်လဲ စျေးသက်သာတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ် ...
အဲဒီလိုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ၀ယ်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ ပိုစျေးသက်သာမယ် .. ပိုအဆင်ပြေမယ် .. ပိုကောင်းပါမယ်...
၀ဘ်ဆိုဒ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ MB ဆိုတဲ့ဆိုဒ်က ဘယ်လိုမှ မလောက်ဖူးဆိုတာ သိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် Free hosting ကို 1G ပေးတာမျိုး၊ Unlimited ကို ၅သောင်းနဲ့ ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါမျိုးဘယ်ဆိုဒ်မှာမှ မရှိပါဘူး ... Reseller တခုထဲက လုပ်နေရင် အဲဒီလောက် မရပါဘူး။ သတိထားမိမလား မသိဘူး။
စဉ်းစားကြည့်ပါ.. Unlimited ဟို့တင်ကို လိုနေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် ... ဒါပေမယ့် မြန်မာဟို့စတင်တွေမှာ ဘယ်လောက်တွေနဲ့ ရောင်းကြလဲ??? တနှစ်စာ သိန်းချီရှိပါတယ် вЂ¦ အဲဒါကို Pusker မှာ ဒိုမိန်းအပါ၀င်ကိုမှ ၅သောင်းနဲ့ ရောင်းနေတာပါ။
ကျနော့်ဆိုဒ်မှာ ပြောပြီးတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်အခြေနေနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားပေးတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကြိုက်တဲ့နေရာက အဆင်ပြေသလို လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကျနော့်ဆိုဒ်နဲ့ကျနော် ရောင်းနေရင်လဲ စျေးကြိုက်သလောက် တင်ရောင်းလို့ရပါတယ်။ ငွေလဲလက်ငင်းရပါတယ်။ ဒိုမိန်းရောင်းတာနဲ့တင် ကျနော် မြတ်နေပါပြီ ... 1G ဟို့စတင်တွေ ဘာတွေ ပေးနေစရာမလိုပါဘူး။ Golden Plan တွေ ဘာတွေ လုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အသက်သာဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ပေါင်းပြီးလုပ်ပေးထားတာပါ။
Free Hosting အတွက် ရွေးစရာ ၂ခုရှိပါမယ် ..
Free Hosting တွေနဲ့ ဒီဟို့စတင်တွေနဲ့ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆို သုံးတဲ့သူ စိတ်တိုင်းကျရင် ကောင်းပါတယ်။ စိတ်တိုင်းမကျရင် မကောင်းပါဘူး။ အဲဒီဟို့စတင်အကြောင်းကို ဖိုရမ်မှာ နောက်မှ သီးသန့်ရေးပါမယ်
ပထမ သိချင်တာက .. cpanel ပေးပါသလား
ညီတို့ ပေးထားတဲ့ service မှာ addon domain unlimited ဆိုတာပါတော့ .. အဲဒါတွေ လုပ်ဖို့ အတွက် ရယ် နောက် phpmyadmin , mx entry , backup အဲဒါတွေ အတွက် ရော ဘယ်လို လုပ်ပေးပါသလဲ .. တစ်ခုခု လုပ်ချင်တိုင်း ညီတို့ နဲ့ ဆက်သွယ် နေရတာထက်စာရင် cpanel ကို ကိုင်ခွင့် ရတာ ကပိုကောင်းမယ် လို့ ထင်ပါတယ် .. ftp ပဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး ..